Kooxda Villa Somalia ee Nabad iyo Nolol oo dareensan naceybka baaxada weyn leh ee ay kala kulmayaan Bulshada ayaa u tashaday Saxaafada Soomaaliyeed. | Arlaadi
Home Blog Kooxda Villa Somalia ee Nabad iyo Nolol oo dareensan naceybka baaxada weyn leh ee ay kala kulmayaan Bulshada ayaa u tashaday Saxaafada Soomaaliyeed.
Kooxda Villa Somalia ee Nabad iyo Nolol oo dareensan naceybka baaxada weyn leh ee ay kala kulmayaan Bulshada ayaa u tashaday Saxaafada Soomaaliyeed.
April 8, 2019| Arlaadi Online
Madaxtooyada, Xukuumada iyo Xafiiska Mursal oo markaan u diyaar garoobaya sida la sheegay dagaal ay la galaan Saxaafada Soomaaliyeed.
Waxaa magaalada Muqdisho ka socda oo heer gabagabo ah maraya Qorshe la doonayo in gebi ahaanba Warbaahinta looga mamnuuco kulamada Baarlamaanka, iyadoo arrintan ay wadatashi ka leeyihiin Xafiisyada ugu sareya dalka, sida Xafiiska Madaxweynaha, Guddoomiyaha Baarlamaanka, iyo Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Todobaadkan waxaa kulan gaar ah wada qaatay Agaasimaha Warfaafinta madaxtooyada C/Nuur Maxamed Axmed, Agaasimaha Warfaafinta Khayre Cali Nuur Salaad iyo Agaasimaha Warfaafinta Gudoomiyaha Baarlamaanka Haashim Aadan Malaaq, iyagoo is weydaarsaday talooyin ku saabsan sida loo joojin karo shaqada Warbaahinta Madaxa banaan iyo waxa lagu bedeli karo.
Kulamada Baarlamaanka ayaa waxaa tabin doona oo kaliya Wakaaladda Wararka u faafisa dowladda ee SONNA sida qorshuhu yahay, waxaana laga mamnuuci doonaa gebi ahaanba Telefishinada Madaxa banaan oo uu ku jiro kan dowladda SNTV.
Tallaabadan ayaa ka dambeysay, kaddib kulankii Baarlamaanka ee Sabtidii buuqa ku dhamaaday, lana isku qabsaday in Saxaafadda dibadda loo saaro iyo inay joogto, kadib markii loo codeeyay in Saxaafadda banaanka looga saaro kulanka Amniga.
Madaxweyne Farmaajo oo dareensan neceybka baaxada weyn leh ee uu kala kulmayo Bulshada ayaa doonaya inuu Saxaafada ka qariyo wax walba oo ka socda hay’adaha kala duwan ee dowladda, taasoo aysan wali ku baraarugin maamulada Warbaahinta madaxa banaan.
Si kastaba, Haddii arrintan dhaqan gasho waxay noqoneysa markii u horeysay oo dowladda xadido ama mamnuucdo dhaq dhaqaaqa Warbaahinta madaxa banaan ee xaqa u leh inay wararka ka helaan hey’addaha dowladda.